Izany no nivoaran'ny Paint nandritra ny tantaran'ny Windows | Famoronana an-tserasera
Izany no nivoaran'ny Paint nandritra ny tantaran'ny Windows
Jorge Neira | | borosy
Betsaka no mety ho tsaho fampiharana Windows 10 vaovao, ary koa ny famongorana ny ampahany betsaka amin'ireny ary ny toe-javatra toy izany dia niteraka resabe teo amin'ny isan'ny mpampiasa io sehatra io, ka niteraka mpamorona mahay mamorona kinova andrana inona no mety ho ilay interface vaovao an'ny Windows 10.
La fanafoanana sy fahatongavan'ireo fangatahana vaovao nanome be ny sain'ny mpampiasa hieritreritra. Anisan'ny antony maro ananantsika ny fanafoanana ny hoso-doko iray amin'ireo programa Windows malaza indrindra.
1 Fa fantatrao ve ny atao hoe Paint?
2 Windows mpiara-miasa amin'ny minitra voalohany
3 Inona no vaovao ao amin'ny Windows 9x, XP ary Vista
4 Ny loko vaovao amin'ny Windows 7 sy 8
Fa fantatrao ve ny atao hoe Paint?
Araka ny fantatsika tsara, ny loko dia io fampiharana io namela ny mpampiasa hanao endrika freehand maro, izay azo aondrana eo ambanin'ny endrika iray (miankina amin'ny kinova an'io Windows io). Tamin'ny alàlan'ny loko, maro ireo mpampiasa nianatra niditra tamin'ny fanodinkodinana solosaina tamin'ny fomba fampiasa indrindra.
Ny faran'ny herinandro lasa teo dia nisy tsaho niely momba ny voarohirohy kinova vaovao an'ny Paint fa i Microsoft dia hivoatra manokana ho an'ny Windows 10, amin'ny endrika App universal, miaraka amin'ny fampiasa touchscreen sy ny stylus (tsy isalasalana fa mieritreritra ny fanombohana ny Surface manaraka).
Ny kinova nohavaozina an'ity tonian-dahatsary sary mahazatra miaraka amin'ny Windows Nahatonga anay hanao famerenana kely momba ny fivoarany sy ireo fiovana rehetra nitranga rehefa namoaka kinova vaovao i Windows. Raha ny marina, raha marina ny tsaho, dia mety ho lasa mpanonta tena mahasoa i Paint.
Windows mpiara-miasa amin'ny minitra voalohany
Ny tantaran'ny Microsoft Paint dia nanomboka tamin'ny 1985. Marina izany, ilay programa fanaovana angano izay ampiasain'ny maro amintsika, na dia hanoratra fotsiny aza, dia 30 taona mahery ary efa misy amin'ny kinova Windows rehetra hatramin'ny voalohany, satria ny kinova voalohany dia efa tafiditra ao amin'ny Windows 1.0, na dia talohan'ny Solitaire aza.
Io kinova voalohany an'ny Paint io dia kinova fahazoan-dàlana iray amin'ny programa antsoina hoe PC Paintbrush, fananan'ny ZSoft Corporation ary ity indray no valin'ny programa fanaovana sary voalohany noforonina ho an'ny PC PC, antsoina hoe PCPaint ary izany no fifaninan'ny Apple Paint tafiditra ao amin'ny Apple II. Hita fa tamin'ny taona 80 dia tsy dia tena izy ireo tamin'ny anaran'ny rindrambaiko.
Ity kinova voalohany ity dia namela ny fampiasana sary monochrome fotsiny (izany hoe voafetra amin'ny mainty sy fotsy, tsy misy loko) ary nitahiry azy ireo tamin'ny endrika tompony, MSP. Tamin'ny voalohany, Ny loko dia tsy natao ho fitaovana natao ho an'ny mpanakanto sary, fa fitaovana iray hafa fotsiny hampiasana ny mpampiasa solosaina vaovao vaovao tamin'izany fotoana izany hampiasa interface interface, manome azy ireo tontolo iainana mahazatra ("taratasy" sy "pensilihazo") ahafahan'izy ireo manao fanazaran-tena amin'ny totozy.
Inona no vaovao ao amin'ny Windows 9x, XP ary Vista
Ny tena fanovana ny Paint dia natomboka tamin'ny Windows 95 izay, ankoatry ny zavatra hafa, avela hitahiry sy hampakatra fanangonana loko manokana.
Ao amin'ny Windows 98, Paint dia afaka mamonjy sary ao amin'ny JPG, GIF, ary PNG (na dia misy mangarahara aza, raha toa ka napetraka ireo sivana sary Microsoft mety), ho fanampin'ny endrika BMP misy anao.
Tamin'ny fahatongavan'i Windows XP, ny paleta miloko dia nitarina tamin'ny alokaloka 48 ary ny fihetsika dia mety hofoanana hatramin'ny sehatra telo. Ny mety ny esory mivantana avy amin'ny scanner na fakan-tsary niomerika mifandray amin'ny PC. Ny borosy kosa dia mbola voafetra ho singa tokana ihany ary avy amin'ity kinova ity dia azo tahirizina ao amin'ny JPG, GIF, PNG ary TIFF ny sary, raha tsy misy ny filan'ny sivana noresahintsika teo aloha.
Taty aoriana, tamin'ny famoahana ny Windows Vista, nisy fanovana kely vitsivitsy tonga tamin'ny interface (toa ny sary famantarana ny fitaovana), fitaovana vaovao roa (ho fanamafisana ny sary sy famoahana azy ireo) ary fiasa "Undo" afaka miverina hetsika 10.
Ny loko vaovao amin'ny Windows 7 sy 8
Ny fiovana mahery vaika indrindra amin'ny Paint tato anatin'ny taona vitsivitsy, farafaharatsiny, rehefa miresaka famolavolana interface, dia mitranga ao amin'ny Fampidirana mitambatra avy amin'ny Windows 7, izay mandray ny interface Ribbon. Ireo fitaovana fampiharana dia mivoatra ihany koa, amin'ny fiezahana hahatratra ny vokatra azo tsapain-tanana kokoa na amin'ny zavaboary namboarina hatramin'ny voalohany na tamin'ny fanovana sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » borosy » Izany no nivoaran'ny Paint nandritra ny tantaran'ny Windows
Ity ny Project Nimbus, tonian-dahatsoratra avy amin'ny Adobe
Endritsoratra tanana 60